Couples in China တရုတ်စုံတွဲများ .. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Couples in China တရုတ်စုံတွဲများ ..
Couples in China တရုတ်စုံတွဲများ ..
Posted by weiwei on Dec 6, 2010 in Creative Writing, My Dear Diary | 20 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီတုန်းက အဖေ အမေတို့နဲ့ အတူတူ တရုတ်ပြည်ထဲလျှောက်လည်ရင်း အမေ့ကို စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခု ပြခဲ့ဖူးတယ်။ လူစည်ကားရာ စူပါမတ်ကတ်တွေ၊ လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းတွေနဲ့ ဘက်စ်ကားတွေပေါ်မှာ တရုတ်စုံတွဲတွေ အများကြီး တွေ့ရတယ်။ အမေ့ကိုပြောပြလိုက်တယ် … သူတို့ကိုကြည့်တာနဲ့ လက်မထပ်မှီလား လက်ထပ်ပြီးလားဆိုတာ သိနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ အမေက စိတ်ဝင်စားသွားတယ် …
ခွဲရတာ သိပ်လွယ်ပါတယ် … အမျိုးသမီးကိုင် စလင်းဘတ်အိပ်ကို အမျိုးသားကလွယ်ထားမယ်၊ အထုပ်အပိုးတွေအားလုံးကို ကိုင်ထားမယ်၊ အမျိုးသမီးလက်ထဲမှာတော့ စားစရာမုန့်တစ်ခုပဲ ရှိမယ်ဆိုရင် သမီးရည်းစားပါလို့ …. အဲဒါနဲ့ ပြောင်းပြန်ဆိုရင်တော့ လင်မယားပါပဲ …
အဲဒီလို အမြင်မတော်အောင် စလင်းဘတ်အိတ်လွယ်တဲ့ ယောက်ျားတွေက တရုတ်ပြည်မှာ အလွန်ပေါပါတယ် … တရုတ်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုမေးကြည့်တော့မှ ပိုဆိုးတော့တယ် … တရုတ်ကောင်လေးတွေက ရည်းစားထားရင် ကောင်မလေးကို အစွမ်းကုန် အလိုလိုက်ရတယ်တဲ့ … မနက်စာမုန့်ဝယ်ပြီး အဆောင်ကို သွားပို့ပေးရတယ် … အတန်းတူရင် ကျောင်းအတူတူသွားရတယ် .. စာတွေကူးပေးရတယ် .. အိမ်စာလဲ လုပ်ပေးရတယ် … ဖုန်းအချိန်မှန်ဆက်ရတယ် … ကျောင်းပိတ်ရက် ဈေးဝယ်ထွက်ရင် အကုန်လိုက်သယ်ပေးတဲ့အပြင် ပိုက်ဆံလဲလိုက်ရှင်းရတယ် … အဆိုးဆုံးကတော့ ကောင်မလေးအ၀တ်တွေပါလျှော်ပေးရတယ်တဲ့ …
ဒါပေမယ့် လက်ထပ်ပြီးရင်တော့ အားလုံးပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ် …
ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးမှ ဒီပို့စ်ကို တင်မလို့ စိတ်ကူးပေမယ့် ဓါတ်ပုံထွက်ရိုက်ဖို့ အဆင်မပြေတာနဲ့ ဒီအတိုင်းပဲ တင်လိုက်ပါတယ် …
တစ်ခုကျန်သွားသေးတယ် … သွားရင်းလာရင်း ညောင်းရင်လဲ ကောင်မလေးကို ကုန်းပိုးရသေးတယ် (ကိုရီးယားကားထဲကလို) …
ဒါပေမယ့် လက်ထပ်ပြီးရင်တော့ အားလုံးပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ် …တဲ့..။
သူကြီးကလဲ … ၀မ်းသာတဲ့လေသံကြီးနဲ့ …။ကြည့်ရတာ သူကြီးတို့သမီးရည်းစား
ဘ၀တုန်းကလဲ အဲ့လိုခံခဲ့ရတယ်ထင်ပါတယ် …
ဟီးဟီး တရုတ်ပြည်မှာ တောင် ပြောင်းနေချင်လာပြီနော်
တရုပ်ပြည်မှာ မိန်းကလေး ရှားလို့နဲ့ တူပါရဲ့ဗျာ။ ဒါကြောင့် အပြစ်မတင်ရက်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ရန်ကုန်မှာလည်း အဲဒါမျိုးတွေ အများကြီးတွေ့ရတယ်ဗျ။ ကိုကိုတွေက ဘာစိတ်ကူးနဲ့ လုပ်တယ်ဆိုတာ မသိပေမဲ့ ကြည့်လို့ အဆင်မပြေတာတော့ အမှန်ပဲဗျ။
အမြင်မတော် ဆင်တော်နဲ့ ခလောက်ဆိုတာ ဒါမျိုးနေမှာ။
ဘယ့်နှယ်ဗျာ … မိန်းကလေးတွေ အလှကိုင်တဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအိတ်ကို လွယ်ပေးရတယ်လို့ပဲ။
ထမင်းဘူးလေး၊ ရေဘူးလေး သယ်ပေးရတယ်ဆို ဟုတ်တုတ်တုတ်။
wei wei ကိုလည်း ကြိုပြောလိုက်ပါပေရဲ့။ အဲဒါမျိုးလုပ်တာလေး လောက်နဲ့တော့ အယုံအကြည် မရှိလိုက်ပါနဲ့။
သေချာချင်ရင် အိတ်ကြီးကြီးထဲမှာ လက်တော့ပ် နှစ်လုံးလောက် ပေါင်းထည့်ပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
လက်ထပ်ပြီးရင်တော့ အားလုံးပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ် .. ဆိုတော့ လက်မထပ်ခင်လေး တရုတ်ပြည်မှာ ခဏလေးနေပြီး လက်ထပ်ပြီး ဗမာပြည်ပြန်လာရင်ကောင်းမလားမသိဘူးနော်…. ဒီမှာကတော့ အားလုံးပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူးထင်ပါတယ် ….
ခုပုံလေးလဲ မချိုးပါဘူး ;)
ဒီကနေတလုပ်မလေးတစ်ယောက်လောက် ရည်းစားလှမ်းထားပီး ယူတော့မယ်ဆိုမှ တလုပ်ပြည်လိုက်သွားရင်မကောင်းဘူးလား?
ချာတူးကတော့ တော်တော်သက်သာချင်တရ် …
မင်းက မြန်မာပြည်ကနေရည်းစားလှမ်းထားတော့ …
ဟိုတလုတ်မလေးကလဲ တရုတ်ပြည်ကနေလှမ်းလက်ထပ်နေမှ ….
သက်သာတာကြီုက်တဲ့ ချာတူးလေး …. ဒန် တန်. တန်
တရုတ်မလေးတွေ သနားဖို့ကောင်းတယ် … ရည်းစားရဖို့ သိပ်လွယ်တာမဟုတ်ဘူး … လက်ထက်ခွင့်တောင်းခံရဖို့ ပိုလို့တောင်မလွယ်သေးတယ် … ယောက်ျားလေးတွေက အလုပ်ရရေး နေစရာအိမ်ရရေးအတွက် လုံးပန်းရတာ အသက် ၃၀ လောက်အထိ အထိုင်မကျနိုင်တော့ အိမ်ထောင်ပြုတာ နောက်ကျတယ် …
အန် … မကြီးဝေပြောတာ တစ်ကယ်ကြီးလား ??? :O
ဒါတောင် ရတဲ့ရည်းစားကို အသေနှိပ်စက် …
အင်း … တရားနဲ.ဖြေ … တရားနဲ.ဖြေ …
ကွီးကွီးကလဲနော် … ဘယ်လိုရှင်းပြရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး ..
ဆူးပေါ်ဖက်ကျလဲ ဖက်ပေါက် … ဖက်ပေါ် ဆူးကျလဲ ဖက်ပေါက် …
အဲဂလိုတွေရှိတော့ အဲဂလောက်တော့ နှိပ်စက်ပေမပေါ့ ….
မဝေ ကိုတော့ မတော် မတရား နာမည် အလွဲသုံးစားမှု နဲ့ တရားစွဲမှ ဖြစ်တော့မယ်။ စားလုံးပေါင်း ပြင်ပေါင်းပါ။ ;)
အန် … မဝေ စာလုံးပေါင်းမမှားလောက်ဘူးထင်တရ်နော်။
ဆူး(မဆူး) ပေါ်ဖက်(ဦးဖက်တီး) ကျလဲ ဖက်ပေါက် … ဖက်(ဦးဖက်တီး)ပေါ် ဆူး(မဆူး) ကျလဲ ဖက်(ဦးဖက်တီး)ပေါက် …
စကားမစပ် … ဦးဖက်တစ်ယောက် အသက်ကြီးမှ ပေါက်ရတာ သနားပါတရ်
တရုတ်ပြည်မှ မဟုတ်ဘူး.. ညန်မာပြည်မှာလည်း တခုကိုရီးယားကားတွေ ခေတ်စားနေလို့.. ဒဂုံစန်တာ (မြေနီကုန်း) မှာ ဒူးထောက်ပြီး ချစ်ခွင့်ပန်တယ်ဆိုလား.. တလောက ကြားမိတယ်။
ဒီလိုပါဘဲ.. ရူးပြမှာ ကြိုက်တဲ့ လူနဲ့ ရူးချင်နေတဲ့ လူနဲ့.. တွေ့ကြတော့.. အဲလို အဖြစ်လေးတွေ ပေါ်လာကြတာ။
တော်သေးတာပေါ့ ဒီလောက်အလုပ်မရှုပ်တဲ့ခေတ်က မိန်းမယူထားမိပေလို့ဘဲ။
တော်ကြာ လူစည်ကားတဲ့ လမ်းမပေါ်မှာ ကင်းမြီးကောက်ထောင်ပြီး 9999 ကြိမ်ချစ်ခွင့်ပန်ပါဆိုလို့ကတော့ ဒွတ်ခဘဲ။
လေးပေါက်ကြီး စိတ်မပူနဲ့ .. အခု ဘ၀ လုပ်ခွင့် မကြုံရလည်း နောက်ဘ၀တော့ အဲဒီလို မျှော်မှန်းလို့ ရပါတယ်။
ီနိုင်တုန်းက စွတ်နိုင်တော့ ယောကျာင်္းတွေပြန်နိုင်ရရော ပြောင်းပြန်ဖြစ်တာပေါ့။